Inona no atao hoe tabataba? Taorian'ny nanombohan'ny fiara, ny motera dia manao "tsindry" gadona mitovy amin'ny feo mandondona vy, izay mihombo haingana araka ny fihenan'ny motera. Amin'ny toe-javatra mahazatra, ny motera dia tsy hanao feo toy izany mandritra ny fotoana maharitra. Ny ankamaroan'ny ...
Hatramin'ny nivoahan'ny motera dia tsy nitsahatra ny nanatsara azy ny olona, ​​ary nahita motera vaovao ihany koa izahay izay misy famindran-toerana isan-karazany manomboka amin'ny lehibe ka hatramin'ny kely. Miaraka amin'ny fitomboan'ny fiara dia nitondra krizy mahery vaika izahay. , Ny solika, loharano tsy azo havaozina, dia ex ...
Rehefa mitaingina lava ny moto dia hiseho matetika ny fahazoan-dàlana amin'ny motera, tranga lehibe na kely loatra, hahitana ny antony, mila manatona fampahalalana marobe ianao, mpamatsy valizy môtô hanome anao fanadihadiana tsotra. Ny fiantraikan'ny fahazoan-dàlana malemy amin'ny motera La ...
Ny tontolon'ny fiasan'ny motera automotive dia henjana, fifandraisana mivantana amin'ny lasantsy, ny maripana avo indrindra amin'ny valizy fanodinana dia mety hahatratra 800 ℃, ary amin'ny faran'ny tsingerin'ny fanosorana, ampiarahina amin'ny asan'ny valizy raha matetika ny hetsika fanokafana sy famaranana, ny faritra valva dia tena mora ...
Ahoana ny fanitsiana ny fanadiovana valizy maotera?
Rehefa mandeha moto mandritra ny fotoana maharitra ny moto, amin'ny ankapobeny ny motera dia hanana fanamorana valizy izay lehibe loatra na kely loatra, lehibe loatra na kely loatra, lehibe loatra na kely loatra. Betsaka ny olona mahalala betsaka momba ny valves no mety tsy mahalala izay mety haterak'izany olana izany sy ny informa ...